Booking & ငွေပေးချေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
ပြောင်းလဲမှုများ & ပြန်အမ်းငွေ
▷ Booking လုပ်ငန်းစဉ်
ကျေးဇူးပြု၍ ဘွတ်ကင်လုပ်နည်းကိုဖတ်ပါ။ (ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ)
တယ်လီဖုန်း - ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှအဖြေမရနိုင်သောမေးခွန်းများမေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဖုန်းဆက်နိုင်သည်။
အီးမေး (လ်) - သင်ကြိုတင်မှာကြားထားနိုင်ပေမယ့်စိတ်ကြိုက်ခရီးကိုသာကန့်သတ်ထားသည်။
အခြားသူတစ် ဦး ဦး အတွက်ကြိုတင်မှာကြားလို့ရလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ အမှန်တကယ်အသုံးပြုမည့်သူအပေါ် အခြေခံ၍ Checkout အသေးစိတ်ဖြည့်ပါ။
Q. ယခု၎င်းကို ၀ ယ်ပါကယနေ့ကျွန်ုပ်အသုံးပြုနိုင်ပါမည်လား။
သင်ဘွတ်ကင်လုပ်သည့်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီရှိ Tour info သို့မဟုတ်မှတ်ချက်များကိုဖတ်ရှုပါ။
လုပ်ဆောင်စရာများ - 1 လုပ်ငန်းနေ့အတွင်းကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုပါမည်။
Package Tour - ကျွန်ုပ်တို့သည်2စီးပွားရေးရက်အတွင်းအတည်ပြုပါမည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - ကျွန်ုပ်တို့သည်2ရုံးဖွင့်ရက်အတွင်းအတည်ပြုပါမည်။
Souvenir: ဘောက်ချာမရှိပါ။ သင် Paypal ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
သင်သည်သင်၏အီးမေးလ်ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏အကောင့် - အမိန့်သို့သွားနိုင်သည်။
ဟုတ်တယ်။ ဒါပေါ့။ သင်ခရီးမစခင်သင့်ဘောက်ချာကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
၎င်းသည်အကြိမ်ပေါင်း 99% ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အီးမေးလ်မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အားချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ
သင်လုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ငွေသားဖြင့်အပြည့်အဝပေးချေမှုမဖြစ်နိုင်ပါ။ လက်ကျန်ငွေကိုသင်ငွေပေးချေနိုင်ပြီး၎င်းသည်2သို့သွားသောရက်များသို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောရက်များအတွက်သာကန့်သတ်ထားသည်။
ကျနော်တို့ USD ကိုပိုနှစ်သက်တယ်။
ထုတ်ကုန်အများစုအတွက်သင်ယခုပေးရပါမည်။2ရက်များသို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောခရီးများအတွက်ကိုရီးယားသို့ရောက်သောအခါငွေလက်ကျန်ကိုသင်ငွေပေးချေနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် PayPal ကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့် PayPal မှတစ်ဆင့်ပေးချေနိုင်သည့်မည်သည့်ကဒ်ကိုမဆိုလက်ခံနိုင်သည်။
သင်မြင်သည့်စျေးနှုန်းမှာအခွန်မပါပါ။ သင်မြင်သောစျေးနှုန်းမှ 4% Paypal ကော်မရှင်အခကြေးငွေရှိသည်။
PayPal နှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemsနာများအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ PayPal ကိုဆက်သွယ်ပါ။ (ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ)
ကြိုတင်ဘွတ်ကင်တစ်ခုအတွက် PayPal လက်ခံဖြတ်ပိုင်းနှစ်ခုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ငါ့ကိုနှစ်ခါသွင်းလား
ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ။ ငွေပြန်အမ်းပါကနှစ်ကြိမ်ငွေပေးချေပါက PayPal မှတစ်ဆင့်သင့်ထံငွေပြန်အပ်ပါမည်။
ဟုတ်တယ်။ ငွေပေးချေမှုလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်စိုးရိမ်ပါကငွေပေးချေမှုမပြုမီ PayPal ပေါ်လစီများကိုဖတ်ပါ။ (ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ)
ဖျက်သိမ်းခြင်းနေ့စွဲရှည်လျားသောလွန်ပြီအခါ။ (သင်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားသောကုန်ပစ္စည်း၏ဖျက်သိမ်းမှုမူဝါဒအပေါ်အခြေခံသည်။ )
သင်၏ log in ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ
ကျွန်ုပ်၏အကောင့်သို့သွားပါ - အကောင့်အသေးစိတ်နှင့်သင်၏စကားဝှက်ကိုပြောင်းပါ။
Lost password ကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းသည် Social Login ၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်ရှိသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်သီးသန့် Pollicy ကိုကိုးကားပါ။ (ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ)
ယေဘုယျအားဖြင့်ခရီးသွား carrier ည့်သည်များသည်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတစ်စီးနှင့်အိတ်ငယ်တစ်လုံးယူဆောင်လာသည်။ သင်ဤအရာထက်ပိုယူဆောင်လာပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားအီးမေးလ်ဖြင့်အကြောင်းကြားပါ (management@koreaetour.com)
ကျွန်ုပ်တို့၏ယာဉ်မောင်းသည်သင်၏ရောက်ရှိသည့်တံခါးရှေ့တွင်သင့်အားစောင့်လိမ့်မည်။ သူ / သူမသည်သင်၏အမည်ပါအစည်းအဝေးဘုတ်ကိုကိုင်ထားသည်။
Q. သင်ကခရီးစဉ်၊ အထုပ်၊
ဟုတ်တယ်။ ဒါပေါ့။ အီးမေးလ်မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ (management@koreaetour.com)
ဟုတ်တယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အထူးအစားအစာကို Order Notes တွင်ဖြည့်ပါသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။ (management@koreaetour.com)
သင့်အတွက်ခရီးသွားအာမခံမပေးပါ။ ဆုံးဖြတ်ရန်သင့်အပေါ်မူတည်သည်။ သင်လိုအပ်သည်ဟုယူဆပါကခရီးစဉ်မစတင်မီခရီးသွားအာမခံကိုဝယ်ယူပါ။
သင်နေထိုင်သောမည်သည့်နိုင်ငံအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
သင်ဘယ်လိုသွားချင်လဲဆိုတာပေါ်မူတည်သည်။ အီးမေးလ်မှတဆင့်အသိပေးပါ (management@koreaetour.com)
၎င်းသည်သင်၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်အချိန်ဇယားပေါ်မူတည်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်အသေးစိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရရင်မဟုတ်ဘူး။ သို့သော် JSA ခရီးစဉ်အတွက်အသက်ကန့်သတ်ချက်ရှိသည် (11 နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်)၊ လူကြီးများသာ Love Museum ထဲဝင်နိုင်သည်။ (လုပ်စရာများ Trick Eye Museum)
အကယ်၍ ငါ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးသွားလျှင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ (လေဆိပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး)
ကျွန်ုပ်တို့၏ကားမောင်းသူသည်ထိုနေ့ရောက်ချိန်ကိုခြေရာခံလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်အဆင်ပြေလိမ့်မည်။ သင်၏လေယာဉ်နံပါတ်သို့မဟုတ်ရက်စွဲပြောင်းပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံအီးမေးလ်ပို့ပါ management@koreaetour.com.
ယာဉ်ကိုယာဉ်မောင်း ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြင့်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုပြီးပါကမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။ ဒါအတွက်အပိုထပ်ဆောင်းပေးရမလား။
များသောအားဖြင့်၎င်းကိုသင်၏ဟိုတယ်သို့ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။ ကုန်ပစ္စည်းသည်သင့်အားရှေ့စားပွဲခုံ၌ဖြစ်စေ၊ သင်၏ဟိုတယ်အခန်းတွင်ဖြစ်စေစောင့်နေလိမ့်မည်။
ဟုတ်တယ်၊ ဖြစ်နိုင်တယ် သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပို့နိုင်စေရန်သင်ကသင့်အားလိပ်စာအကြောင်းကြားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သို့သျောလညျး, ငါတို့ကနိုင်ငံခြားပို့ဆောင်မှုဝန်ဆောင်မှုမပေးပါဘူး
Q. အကယ်၍ ရောက်မလာရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။
ပေးပို့ခသည်စုစုပေါင်းစျေးနှုန်းပါ ၀ င်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Q. Etourism ကိုမည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်နည်း။
ကုမ္ပဏီ၏ဆက်သွယ်ရန်နံပါတ် - + 82-2-323-6850
Whatsapp: + 82-10-3679-6855